ထ = ထိန်းထားတဲ့ ကြားက. ပြောမိတဲ့ စကား.( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောဦးမယ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ထ = ထိန်းထားတဲ့ ကြားက. ပြောမိတဲ့ စကား.( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောဦးမယ်)
ထ = ထိန်းထားတဲ့ ကြားက. ပြောမိတဲ့ စကား.( တိုင်းပြည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောဦးမယ်)
Posted by alinsett on Sep 25, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Myanmar Gazette, Short Story | 26 comments
အချိန် မမှန်တဲ့ မြို့ ပတ်ရထားတွေ..ပေါ်မှာ… ဆက်ရှိနေမယ် ။
လူတန်းစေ့မနေရတဲ့ …. ဘ၀တွေကြားမှာ…. ဆက်ရှိနေမယ် ။
မသေသင့်တဲ့ ရောဂါလေးတွေနဲ့ … သေနေရတဲ့ဆင်းရဲသား တွေကြားမှာ…..ဆက်ရှိနေမယ် ။
ပညာ မသင်ရပဲ… လမ်းဘေးရောက်နေတဲ့ ……
သူ တို့ ကို…ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်မလဲ…. လို့ ..နည်းလမ်းတွေ…ရှာပေးရင်း…..ဆက်ရှိနေမယ် ဟာ..။
နောက်က ပျက်တဲ့လမ်းတွေ.ပေါ်မှာ….ဆက်ရှိနေမယ်
၀င်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မမျှတ တဲ့ဘ၀တွေ…ထဲမှာ..ဆက်ရှိနေမယ်
တစ်ရက် အလုပ် မလုပ်နိုင်ရင်..တစ်ရက် ထမင်း ငတ်တဲ့ ….အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ မရရှာ တဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမှာ…ဆက်ရှိနေမယ် ။
အူမ မတောင့်လို့ … သီလ မစောင့်နိင်တော့တဲ့ ……… ချို့ တဲ့ နွမ်းပါးသူတွေ….ကြားမှာ…ဆက်ရှိနေမယ်
ရေစီးရေလာ..ပိတ်ဆို့ နေတဲ့ ….. မြောင်းတွေ… ကြောင့်.. မသန့် ရှင်းတော့တဲ့မြို့ တော်မှာ…..
စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းမှု နဲ့လာဘ်ပေး..လာဘ်ယူ မှု တွေ …….ရောထွေးနေလို့ …
မလှပတော့တဲ့မြို့ တော်မှာ…………….
ပြော ရေး ဆို ခွင့် ဆိုတာတွေ..နည်းပါးလို့ ……
မွဲပြာ ပုဆိုးက…. တက်မလာတဲ့ …
ဖန်တီးမှုတွေ.နဲ့ဒီမြို့တော်မှာ….
ခံစားချက် ပြင်းထန်စွာနဲ့ …
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး..စာတိုက် ပုံး ကလေးထဲ… ထည့်လိုက်ရင်…
ဒီစာက မင်းဆီ..ဘယ်အချိန်လောက်မှ ရောက်မလဲ..ဆိုတာ…မခန့်မှန်း နိုင်ဘူး ။ ကြားမှာ..ပျောက်ခြင်း မလှလည်း..ပျောက်သွား နိုင်သေးတယ်လေ ။
မနက်ဖြန်မှာ… ဒီ နိုင်ငံက အချိန် အတော်ကြီးကြာအောင်… ထွက်သွားတော့မယ့်… မင်းဆီ…
G Mail နဲ့ ပဲ..ပို့လိုက်တယ် ။ ( ဒါတောင်မှ… အင်တာနက် လိုင်းတွေက ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် ဖြစ်နေလို့ .. အတော်လေး စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြိး..ပို့ လိုက်ရတာ )
ဒီနိုင်ငံ ဒီ လူမျိုး… ၊ဒီ ဘာသာ နဲ့ဒီ သာသနာကို မှ….
ချစ်မြတ် ကျွမ်း ၀င်..တွယ်တာ …နစ်ဝင်လွန်းသူ..ငါ့က်ို.. ထားခဲ့ ပါ ။
ငါ ချစ်တဲ့ …မင်း က…
မင်း ချစ်တဲ့ငါ..ကိုပဲ.. ချစ်တတ်တာပါ ။
မင်းချစ်တဲ့ ..ငါ..က တိုင်းပြည် တစ်ခု လုံ့း ကို ချစ်နေတာ..ဟ။
ငါ ချစ်တာ..မင်း တစ်ယောက်ထဲ… မဟုတ်ဘူး ။
ငါ့ရင်ထဲမှာက..မင်း…တစ်ယောက်ထဲ.ကို… ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ…. င်္သီးသန့် ..ရှိ မနေဘူး ။
ဒီ နိုင်ငံ ချစ်တယ် ။
ဒီ လူမျိုး.. ဒီ ဘာသာ..ဒီ သာသနာကို.ချစ်တယ် ။
ငါ ချစ်တဲ့မင်း…… အပါအ၀င်..ဒီ တိုင်းပြည်က….. ပြည်သူ ပြည်သားတွေ..အားလုံးကို.. ငါ….ချစ်တယ် ။
မင်းက…ပညာ တွေ..သိပ် တတ် လွန်းတဲ့မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ ။
( ဒါပေမယ့်..မင်း တတ်ထားတဲ့ ပညာ ဆိုတာတွေက… ငါတို့ ..တိုင်းပြည် အတွက် မဟုတ်တော့ဘူးနော် ။ )
မင်းတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ …ထိုက်တန်တဲ့ … အကျိုးရလဒ်တွေ…ရမယ့်..အခြားသော နိုင်ငံတွေ..ဆီ… မင်းသွားတော့မယ်ပေါ့။
အေးလေ…………… ငါ မင်းကို အပြစ် မဆိုပါဘူး ။
ပညာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးရလဒ် တွေ.ပြန်ရဖို့ .ဆိုတာ….
( ပညာ နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးရလဒ် ဆိုတာကို..ငွေကြေးဥစ္စာ အတိုင်းအတာတွေနဲ့တိုင်းတာရင်ပေါ့လေ..။)
မင်း…. တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ … ဒီနိုင်ငံမှာ… လုပ်ကိုင် စားသောက်ရင်…..
မင်း ဘ၀ က..တောက်ပြောင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။
မင်း ဘ၀ ကောင်းစားဖို့ …..
ထိုက်တန်တာတွေ..ပြန်ရမယ်… လို့ ..မင်း ထင်တဲ့ တိုင်းပြည် တွေဆီ… သွားပါ ။
သွား ပါ တော့ ဟာ…..။
တစ်ခုပဲ… ငါ..၀မ်းနည်းတယ် ။
ဒီတိုင်းပြည် က…. ထွက်ခွါ သွားတာ… ဒီ တိုင်းပြည် ရဲ့ဆုတ်ယုတ်မှု တစ်ခုပါပဲ ။
လူ့ စွမ်းအား ဆုတ်ယုတ်မှု လို့ .. ခေါင်းစဉ်ကြိးကြီး..တပ်လို့ ရမယ် ထင်တယ်နော့ ။
မင်းလို…တိုင်းပြည်ကို…စွန့်ခွါ သူတွေ..များလာတဲ့ အခါ……
ဒီတိုင်းပြည် ရဲ့လူ စွမ်းအား… ဆုတ်ယုတ်မှု ကလည်း ပို သိသာ လာမှာပေါ့ ။
ငါ့က်ို ခေါ်တယ် ။
လိုက်ခဲ့ ပါလား…. တဲ့ ။
ငါက… အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာလေး တစ်ခု ပဲ… တတ်ထားတာပါ ။
ဒါပေမယ့်…… အဲဒီ တတ်သလောက်လေးနဲ့ ပဲ ….
စာပေ အနုပညာကိုလည်း..အသက် လို … ချစ်တတ်နေပြီ ။
စာပေအနုပညာရယ်……. ငါရယ်… ဒီတိုင်းပြည် ရယ်…
ဘယ်လိုမှ ခွဲခြားလို့ မရအောင်လည်း..ပေါင်းစပ်….တွယ်ငြ်ိ ခဲ့ပါပြီ ။
ငါ…စာတွေ ရေးမယ် ။
ငါ ရေးသမျှ စာတွေထဲမှာ….
ဒီတိုင်းပြည်..ဒီလူမျိုး..ဒီဘာသာ သာသနာ အတွက်….
ကောင်းသည်ထက်ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာတွေ….
ငါ..စကားတွေ…. ပြောမယ် ။
ငါ ပြောသမျှ စကားတိုင်းမှာ………
ငါ့တိုင်းပြည်…../ ငါ့ လူမျိုး..ဘာသာ သာသနာ..အတွက်….
ဒီ ထက် ပိုကောင်းလာစေချင်တဲ့ … စေတနာ …ပါ စေ ရပါ့မယ် ။
ငါ..ပြောသမျှ စကားလုံးပေါင်း များစွာ….
ငါရေးသမျှ… စာသားများစွာ….ကို ဖတ်ပြီး….
အကျိုးရှိသွားမယ်..ဆိုရင်တောင်…. ငါ မရှုံးဘူး ။
ငါ..ရေးရ / ပြောရ တာ တန်မှာပါ ။
ရူး တဲ့ ကောင်လေးကို….
ထမင်း ငတ်မှာပေါ့….. လို့ …
ဒီနိုင်ငံမှာ..စာရေး ဆရာ ….လုပ်ရင်…ငတ်မှာပဲ ။
ငါ…. စာတွေ..ဆက်ရေးနေဦူးမယ် ။.
စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ရင်…
လူချမ်းသာ စာရင်း ၀င်ပါတယ် ။
ဂျေကေရိုလင်း လို ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွဲ..စာအုပ်မျိုးတွေ…. ငါတို့ နိုင်ငံမှာ..ရေးနိုင်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် ။ ။
ဒါပေမယ့်….ရေး ရင်… ဖတ်မယ့်သူ…. သန်းနဲ့ချီ မရှိဘူး ။
ဒီတော့ ဂျေကေရိုလင်းလို… သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေး မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
ငါတို့စာပေ သမားတွေ…ရေးချင်တာကို လွတ်လပ်စွာ…ရေးသားပြောဆိုခွင့်……
ငါတို့တိုင်ပြည်မှာ…. စာရေးဆရာဖြစ်ရင်..အလွန်ဆုံး… ကားစုတ်စုတ်ကလေး တစ်စီးလောက် စီးနိုင် ရုံပါပဲ ။
ဒါတောင်.. သေတဲ့ အထိ..လိုင်းကား. ကျပ်ကျပ်ကို တိုးစီး သွားရတဲ့စာရေးဆရာ ကြီးတွေ… အများကြီးရှိခဲ့တယ် ။
ကာတွန်းလေးတစ်ကွက် ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် ။
ယောကျာ်းလုပ်သူက သတင်းစာ ဖတ်နေတာ…။
မိန်းမ လုပ်သူကို… သတင်းစာထဲမှာ ပါတဲ့ သတင်းလေးကို..လှမ်းအော်..ပြောလိုက်တဲ့ ပုံလေး..။
သတင်းက တိုတ်ိုလေးပါ ။
” ကဗျာဆရာ မောင်မွဲပြာ….
ကြက်ရိုး.စူးလို့ ..သေပြီ….တဲ့“
ကာတွန်းလေးက အဲဒါပဲ ။
ဒါပေမယ့်… ငါတို့ တိုင်းပြည်က ကဗျာဆရာလေးတွေရဲ့ အခြေအနေ… ပေါ်သွားတယ် ။
ဒါက..စကားကြုံလို့ ပြောပြတာပါ ။
စာမူခ နဲ့ …………………
အသက်ရှင်လို့ .. မရ ဘူး ။
စာ မူ ခ နဲ့အသက် ရှင် လို့ …. မ ရ ဘူး ။
ငါလေးစား. မြတ်နိုးတဲ့စာရေးဆရာ ကြီးတစ်ယောက်ရှိ တယ် ။
သူ့ ကို မင်း..သိမှာ ပါ ။
စာရေးဆရာကြီး..ပီမိုးနင်း…. လေ ။
ငါ့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မြန်မာ ပညာရှိကြီး လို့သတ်မှတ်တယ် ။
ဒီတိုင်းပြည်က… လူငယ်တွေက်ို…. တိုးတက်အောင်မြင်စေချင်လွန်းလို့ …..
လမ်းညွှန်ဆုံးမတဲ့အောင်မြင်ရေး တက်ကျမ်းတွေ…..
ဆင်းရဲ ချို့ တဲ့ စွာ…နေထိုင် အသက်ရှင်ပြီး…
မလှမပ ပဲ..သေဆုံးသွားခဲ့တယ် ။
ငါ…. လေးစားတယ် ။
ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ…. မျက်ရည် နည်းနည်းပါးပါး.ကျမိရင်တောင်…..
ခေါင်းငုံ့ချတတ်အောင်..ငါ..သင်ယူ ထားပါတယ် ။
အချိန်မမှန်တဲ့ မြို့ ပတ်ရထားတွေ..ပေါ်မှာ… ဆက်ရှိနေမယ် ။
စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းမှု နဲ့လာဘ်ပေး..လာဘ် ယူ မှု တွေ …….ရောထွေးနေလို့ …
မလှပတော့တဲ့မြို့ တော်မှာ……
ဘတ်စ်ကား ကျပ်ကျပ်ကို…… ငါ တိုးစီးနေဥှီးမယ် ။
မသန့် ရှင်း မလတ်ဆက်တော့တဲ့ ….
အစားအစာတွေ ကို…. ငါ.စားနေဦးမယ် ။
သတင်းမှား တွေကိ်ု…. ငါ..ဖတ်နေဦးမယ် ။
မတရား../ မမျှတ တဲ့ …. လူနေမှု ဘ၀ ထဲမှာ…. ငါ ဆက်..ရပ်တည်နေဦးမယ် ။
ဖွင့်ကြည့်လို့ .. ဘယ်တုန်းကမှ မရတဲ့ .( ရပါပြီ လို့ ..သူတို့ ပြောနေတဲ့ …)
အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေက်ို…ရ နိုးနိုးနဲ့ ….. ငါ…ဖွင့်ကြည့်ဖြစ်ဥိးမယ် ။
သွယ် ၀ိုက် ပြီး….. ငါ..စာတွေ…ရေးနေဦးမယ် ။
တည့်တည့်ရေးရင်… ဘေးဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်း… ငါ..သိ နေဦးမယ် ။
လူတွေ..မပြောင်း/ မူတွေ မပြောင်းပဲ…. စကားလုံးလေးတွေ.ပြောင်းသွား ရုံ နဲ့ ….
ကောင်းလာပါပြီ….လို့ …. ( မကောင်းမှန်းလည်း.သိ သိကြိးနဲ့ …. ) ကိုယ့် စိတ်ကိုယ်..ဖြေသိမ့်နေရဦးမယ် ။
လှပ သန့် ရှင်းပြီး..နေပျော် တဲ့နေရာ တစ်ခု ဆီ..သွားရတော့မယ် ။
ချစ်မှန်း..ငါ သိပါတယ် ။
မင်းနဲ့အတူ………
ဇိမ်ရှိရှိ နေနိုင်မယ့်… နေရာ ကို..လိုက်ခဲ့ပါ…လို့ .. ခေါ်နေကတည်းက…ငါ သိပါတယ် ။
မင်းငါ့ကို ချစ်မှန်းငါသိတယ် ။
ငါ့ လူမျိုး… ငါ့ ဘာသာ သာသနာကို… မင်း..သိပ်မချစ်တတ်သေးပါဘူး ။
ငါ့လူမျိုး..ဘာသာ သာသနာ ဟာ… မင်းရဲ့လူမျိုး..ဘာသာ သာသနာလည်းဖြစ်တယ် ။
ဒါပေမယ့်… မင်း…..ချစ်တဲ့ အချစ်နဲ့ …….
ငါ ချစ်တဲ့ အချစ်တွေက….
ငါ..မင်းကို…… ချစ်ပါတယ် ။
ပြောမပြ တတ်အောင်… ချစ်ပါတယ်ကွာ..။
ငါ…ဒီမှာပဲ… နေဦးမယ် ။
ဒီနိုင်ငံ../ ဒီလူမျိုး./ ဒီဘာသာ/ သာသနာ အတွက်….
သဲတစ်ပွင့်နေရာက ပဲ..ဖြစ်ဖြစ်../ အုတ် တစ်ချပ်နေရာကပဲ.ဖြစ်ဖြစ်…..
ငါ့မြေ… ငါ့ရေ..ငါ့ တိုင်းပြည်ကို…..
ငါ့ အသက်လောက်..ထိ ချစ်တယ် ။
တစ်ခုတော့….. ပြောချင်ပါတယ် ။
မင်း…အဲဒီကို ထွက်သွားပြီး….တဲ့ နောက်….
အဲဒီ မှာ……… နေပြီး……………
ရလာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကို……… စုစည်းပါ ။
တစ်နေ့ နေ့ မှာ..ဒီကို….
ဒီလူမျိုး..ဒီဘာသာ / သာသနာ အတွက်……………..
မင်း…တတ်နိုင်တဲ့ ….. တစ်ခုခုကို….
တာဝန် ယူ ပေးပါကွာ…။
လှပ လုံခြုံ သွားတဲ့ အချိန် အထိ….. မင်းရဲ့ပညာတွေကို…….
အဲဒီ နိုင်ငံ အတွက်…. ပေးဝေ..ပြီးရင်……
မင်းလို..ပညာရှင်တွေ…. လိုနေပါတယ် ။
အနစ်နာခံပြီး….. တိုင်းပြည် အကျိုးကို… ပညာပါပါ ဖြေရှင်း…တည်ဆောက်ပေးနိုင်မယ့်….
မင်းလို..ပညာရှင် လူငယ်တွေ…လိုအပ်နေတယ် ။
ဒီ တိုင်းပြည်မှာ……. ပညာရှင် လူငယ်တွေ….
ငါတို့ ရဲ့ဗမာပြည်ကြီး…..
သာယာကောင်းမွန်…… လာတဲ့ တစ်နေ့ နေ့ ကို……
သွေးရူးသွေးတန်း…မျှော်လင့် တောင့်တ မိသလိုမျိုး………
25 .9.2012
က = http://myanmargazette.net/141855/arts-humanities
ခ = http://myanmargazette.net/143018/arts-humanities
ဂ = http://myanmargazette.net/143588/arts-humanities
ဃ = http://myanmargazette.net/144518/arts-humanities
င = http://myanmargazette.net/145317/arts-humanities
ဈ = http://myanmargazette.net/147883/creative-writing
ကျွန်တော် ခံစားခဲ့တဲ့အက္ခရာ ထွေရာလေးပါးများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်ရှု ခံစားပြီး
အင်း………ပြောချင်တာတွေတော့ များကြီးပဲ..ဒါပေမဲ့ ထိန်းထားလိုက်ပါတော့မယ် :ha:
ခံစားဖတ်ရှု သွားပါတယ်အလင်းဆက်ရေ ဒီပိုစ့်လေးထဲ အလင်းဆက်ရဲ့ စေတနာတွေထဲ့ထားတယ်ထင်ရဲ့။
ထိမ်းထားရတာတွေများလို့လားမသိ…ပြောမဲ့ပြောတော့ အိတ်သွန်ဖာမှောက်၊ ပုံးဖောက် အိုးလှန် ၊တစ်ခုမကျန် အမှန်တွေကြီးပါပဲလားဆရာလေးရယ်……..
ငါ…. စာတွေ..ဆက်ရေးနေဦူးမယ် ။
ကျုပ်လည်း ဆက်ရေးနေဦးမယ် …
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရေးထားတဲ့ပို့စ်လေးကို အားပေးသွားပါတယ် ၊
ဖန်တီးမှုတွေ.နဲ့ဒီမြို့တော်မှ
ယပလက်မှာ ဟိုဟာလုပ်ဖို့ ဆိုပြီး
မင်းသွားခဲ့တာ ၁လကျော်ကြာခဲ့ပြီမို့ 
အခုလောက်ဆိုရင် အနာကျက်ပြီး အသားကျနေလောက်ရောပေါ့
အခုဆိုရင် တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ ၊ ဦးရေနည်းလို့ လုနေကြတယ်လို့ အသံတွေကြားနေရတယ်
တို့ နိုင်ငံကို တန်းတန်းမတ်မတ်
ပြန်လာ လုပ်ကျွေး ပြုစုနိုင်ပါစေလို့ 
ညီငယ် အလင်းစက် ရေ ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမန့် ခဲ့လိုက်ပါတယ်
ထပြီးပြောမယ်လုပ်တော့ မင်းကစိန်ခေါ်တာလားတဲ့ ဒါနဲ့ဘဲ
ထိုင်ပြောမယ်ဆိုပြန်တော့ မင်းကမလေးစားတဲ့သဘောလားတဲ့ ဒီလိုနဲ့ဘဲ
ထားလိုက်တော့မယ်ဆိုလဲမဟုတ်နဲ့ ကိုအလင်းဆက်ရေ ဘယ်လိုပြောရင်ရမလဲ
စဉ်စားကြရအောင် ဒို့တွေ ဒ ကို သာ ဒိုး ကြပါစို့ဗျာ။
နိုင်ဂံဂျားထွက်တာလည်း loss မဟုတ်ပါဗျာ။ gain ပါ။
“တစ်ခုပဲ… ငါ..၀မ်းနည်းတယ် ။
ဒီကမ္ဘာက…. ထွက်ခွါ သွားတာ… ဒီကမ္ဘာ ရဲ့ဆုတ်ယုတ်မှု တစ်ခုပါပဲ ။
လူ့ စွမ်းအား ဆုတ်ယုတ်မှု လို့ .. ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီး..တပ်လို့ ရမယ် ထင်တယ်နော့ ။
မင်းလို…ကမ္ဘာကို…စွန့်ခွါ သူတွေ..များလာတဲ့ အခါ……
ဒီကမ္ဘာရဲ့လူ စွမ်းအား… ဆုတ်ယုတ်မှု ကလည်း ပို သိသာ လာမှာပေါ့ ။
မင်းကို ဒီကမ္ဘာမြေရဲ့.. အင်မတန်လှတဲ့.. အုန်းပင်တွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာကလေးတရွာမှာ.. မွေးခဲ့တယ်.။
တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြိးတဲ့အခါ.. အနုမြူမှုန်တွေ.. အနုမြူဆောင်းတွေရဲ့ဒဏ်တွေကြား.. ကြံ့ ကြံ့ခံရင်း. တဖုတ်ဖုတ်သေကုန်ကြတဲ့.. ရောင်ခြည်သင့်သူတွေကို မကူ..မစောင့်ရှောက်ပဲ.. မင်းက.. ဟိုး…ရောင်ခြည်လွတ်ရာ. မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်းနက်ထဲ.. သုတေသနတွေလုပ်နေခဲ့တယ်.
အခုတော့.. မင်းက ကမ္ဘာမြေကိုစွန့်.. အင်္ဂါဂြိုလ်ဆီ သွားပြီပေါ့..
ခလုပ်တချက်နှိပ်ယုံနဲ့.. လိုချင်တာရနိုင်တဲ့.. မြေနီတွေနဲ့ စိန်ပေါ.. ရွှေပေါ.. အကုန်ပေါတဲ့.. မြေနီကမ္ဘာတုမှာ.. မင်းပျော်ပါစေ..။”
“ငါ…ဒီကမ္ဘာမှာပဲ… နေဦးမယ် ။
ဒီကမ္ဘာ../ ဒီလူသားမျိုးနွယ်./ ဒီဘာသာစကား အတွက်….
ငါ့မြေ… ငါ့ရေ..ငါ့ ကမ္ဘာကို…..
လူ့အသက် နှစ် ၁၀၀၀ ဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့ နည်းပညာ အင်္ဂါဂြိုလ်မှာ.. အသစ်ပေါ်နေပြီကြားတယ်..။ ငါအဲဒါ.. ရနိုင်မလား.. ” :harr:
မှတ်ချက်။ ။ ခရစ်နှစ် ၂၁၅၀ တွင် လူတို့ပျမ်းမျှအသက် ၅၀၀ နှစ်ရှိ၍.. တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီး.. မြေကမ္ဘာပျက်ကာ.. အလွန်တိုးတက်နေသော အင်္ဂါဂြိုလ်တွင်.. တခြားစင်္ကြာဝဌာမှ အေလီယံများနှင့် လူသားတို့မျိုးစပ်ပြီး. “လူယန်”မျိုးနွယ်စုရှိခဲ့သည်..။
ထိုကမ္ဘာနီ(အင်္ဂါဂြိုလ်)သို့.. “သူမ” သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း.. )
ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှပြီး ပြန်လာမယ့်နေ့ကို ငါစောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့… :harr:
” ငါ ချစ်တဲ့ …မင်း က…
ငါ ချစ်တဲ့မင်း…… အပါအ၀င်..ဒီ တိုင်းပြည်က….. ပြည်သူ ပြည်သားတွေ..အားလုံးကို.. ငါ….ချစ်တယ် ။ “
သူကြီး လက်မ ပြန်မရတော့ ဘူးလား ခင်ဗျ ။ ထောင်စရာ မရှိဖြစ်နေပြီ ။ ဘယာဘဲ ကြော်ခိုင်းရတော့မယ် ။ :hee:
အလင်းဆက် ရေ .. ဘယာကြော်ပါ ။
သဂျီးတင်ထားတဲ့ “လူယန်”မလေးအချိုးအဆစ်လှသနော်… :harr:
ထိန်းထားတဲ့ကြားက ထွက်သွားတဲ့မင်း ထမင်းငတ်ရင်တောင် ထမီ ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ပြန်လာမယ်မကြံနဲ့ 
may flowers ရေ…
ကျွန်တော်တို့ … ထိန်းထား ရတဲ့ စကားတွေ/ ခံစားချက်တွေ…ကို
တစ်နေ့နေ့တော့ ပြောပြခွင့်ရလာနိုး…နိုး…နဲ့ 
ကျွန်တော့်ကို မထိန်းသိမ်းကြပါနဲ့ ဦးနော် ။
ခံယူချက်ချင်း တူညီကြပြီပေါ့နော် ။
တူတူ ငတ်ကြစို့ …။ ( စာရေးဆရာ လုပ်ရင်..ပြောပါတယ် ။ )
ဒါပေမမယ့်… ထမင်းမငတ် ..အောင် ရေးဦးမယ့် အလင်းဆက်..ပါကွယ်…
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရေးထားတဲ့ပိုစ့်ပါ ။
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ … ခံစားဖတ်ရှု သွားလို့ ..
ဘာ ..လိုလို… ညာလိုလို…..
ဖတ်ရှု..ခံစားပြီး.. မန့် သွားလို့ ကျေးဇူး..ကိုကြီးပေ….
နောက်လာမယ့်… အက္ခရာများနဲ့ …..
ခရီးတစ်ခု အတူ သွားကြဦး စို့ နော် .
က မှ… အ ထိ အမှီလိုက်ပါ…ပြီး..
အပီအပြင် ခံစား..ဖတ်ရှု.ပေးနေတာလေးတွေ့ တော့….
ပြောမပြ တတ်အောင်…ကျေးဇူးတင်..ရပါတယ် ။
ဒီတစ်ခါ……က -= မှ အ = အထိ ပြီးသွားလို့ …
နောက်တစ်ခေါက်…. က = ကနေ..ပြန်… စ ဖြစ်ရင်….
ခ = မှာ….
ကိုခင်ခ ကို… ခင်ခင်မင်မင် ..ချစ်ခင်တဲ့အကြောင်း…ရေးမယ်ဗျာ.။
အဲဒလိုလည်း… ယူဆလို့ ရဒါပေါ့နော် ။
သိပ္မံ ၀တ္ထုတိုလား..ဟင် ။
ပုံထဲက… ကောင်မလေးက..တားတားရဲ့နှင်း…မဟုတ်တာတော့သေချာပါပေ့ ။
တဂျီးရဲ့ ..နှင်း…. လား။
ဖတ်ရှု.ခံစား လာလို့ …
မ = မှာ….
အန်တီမမ…. အကြောင်း… ဖြစ်လာ ../မလာ..ဆိုတာလေးတော့….
အဲ.. ဘာတွေမှန်းလည် မသိ ။
တားတားက ခံယူချက်ပြင်း ထန်ပုံတော့…
ထ = မှာ..တားတား…အရင်ဆုံးရေးထားတာက.. တစ်ပုဒ်ပါ ။
အဲဒီ တစ်ပုဒ်ကို…. မတင်ပြဖြစ်ပဲ….
၀တ္ထုတို… လေး အဖြစ်..ပဲ..ပြန်လည် ရေးသား တင်ပြလိုက်ရတာပါ ။
အရင်တုန်းက.. ထ=…… ကို..
တင်ပြ ချင်ပါသေးတယ် ။
ဖတ်ရှု ခံစားပေးလို့ ..
ဆက်လက် အားပေးပါဥိးလို့ ….
ရွာထဲက..ချက်တတ်ပြုတ် တဲ့ ..
ဗယာကြော် နည်းလမ်းလေးများ..တင်ပြ ကြပါဦး ။
အမြင်တွေ..မှန် နေ ပါလား ။ ။
သတ္တု..ကိုယ်ထည်ကြိး ဖြစ်မယ်ဗျို့ … ဟို့ ဟို့ …
ဗျစ်…ဗျစ်..ဆိုတာတွေက ဘာတုန်းဗျ ။
ထိန်းထားတဲ့ ကြားက..ထွက်..ကျ ကုန်ပြီလား…။
ဗရာဘိုပါ အူးလေး အလင်းဆက်ရေ…
အလွန်ကောင်းပီး လက်ရာမြောက်တဲ့ အတွေးတွေ အတွက် အားကျမိပါကြောင်း….။
ကိုသူရရဲ့စာတွေထဲ အနုပညာရဲ့ ရိုးသားမှုလေးတွေ တွေ့နေရတယ်။ နောင်ဆက်လက်ပြီး ဦးနှောက်ပေါက်ကွဲမှု အားကောင်းဦးမှာပါ။ ပြုံးတို့ကတော့ အဖွားကြီးဖြစ်ပြီး ဥာဏ်တွေလည်း ထိုင်းနေပြီဆိုတော့ ဆန်းသစ်တဲ့စာလုံးလေးတွေ ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းနေတဲ့ ကိုသူရကို မနာလိုဘူး၊ ဒါပဲ။
ကိုအလင်းဆက် ရေ ! ခုတလော အိပ်ချိန်ထဲ က စာဖတ်နေရတာမို့ သိပ်မမန့်ဖြစ်ဘူးဗျ ! အားလုံးကို ဖတ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက် အားကျမိပါတယ် ။ အကြော်စုံ ပါဗျို့ !
အားကျ သွားတယ်..ဆိုတဲ့ ..
ဦးရဲ စည်.… ။
အလွန်ကောင်းပြီး.. လက်ရာမြောက်တဲ့အတွေးတွေ...လို့ .
တားတား..ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာပိုဒ်လေးတွေ…ရှိတယ် ။
အဲဒါလေးတွေ..တစ်နေ့နေ့..တင်ပြ ဥိးမယ် ။
တားတား… ဘာသာပြန် စွမ်းရည်..ဘယ်လောက် …. စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းကြောင်း…..
မမပြုံးလို …. စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်က…
၀မ်းလည်း..သာ မိပါတယ် ဗျာ.။
ကျွန်တော်… နဲ့ အက္ခရာများ..ခရီးသွားခြင်း…မှာ…
လိုက်ပါ ခံစားပေးပါဥိးနော့ ။
ရသမြောက် အဓိပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ အက္ခရာများနဲ့ ခရီးသွားခြင်း ကိုအားပေးလျှက်ပါ။ မြို့ပတ်ရထားနဲ့ခရီးသွားရင်တော့သတိထား။ ဂျပိုးကိုက်တယ်နာမည်ကြီးနေတယ်။
ကြွက်တွေရော… ပေါမှပေါ..နော့ ။
အင်း…မြိုးပတ်ရထားခတွေ ..ဈေးကြိးသွားတဲ့ နေ့နောက်ပိုင်း…မှာ..
ကျွန်တော်လည်း…. အက္ခ၇ာများနဲ့ ပဲ..ခရီးသွားတော့တယ် .။
မြို့ ပတ်ရထားနဲ့ မသွားတော့ဘူး။
စက်သံ ဆူလွန်း ညံလွန်း.။ စက်အပူ၇ှိန် ပူလ၊ွန်း…
ဈေးကြီး လွန်း ( အထူးကားဆို ပိုတောာင်ကြီးသေး..)
အဲဒီလို ဒုက္ခတွေ.ဘယ်တော့များမှ ကျွတ်ပါ့မလဲ….
ခရီးသွားခြင်းကို..လိုက်ပါ…စီးမျော… ခံစားပေးလာလို့ ..
ကဗျာက သိပ်ကောင်းပါတယ် ရင်ထဲကို ထိရှ ခံစားလိုက်ရတယ် ဆရာအောင်ချိမ့် ကို
သတိရမိပါတယ်။ဒါမျိုးကဗျာပုံစံတွေ တွေ ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖတ်ရမြင်ရတယ်။
ရောဂါနဲ့ မတဲ့ လို့ စားချင်တိုင်းစားမရတဲ့ ဘဝမှာ
ခါးနာတတ်လို့မွေ့ ယာနဲ့ မအိပ်ရပဲ ဖျာကြမ်းပေါ်မှာလှဲရင်း
ဂျပိုး အကိုက်ခံ ရဦးမယ် ။
ရေးချင်တာတွေများပြီး ကိုရင့်လိုမရေးတတ်လေတော့ 
ဂဇက်မှာပဲ စောင့် ဖတ်နေဦးမယ် ။
အားပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျာ.။
ဒ = ဒီ ည ပဲ..တင်လိုက်မယ်..နော် ။